Putin oo beeniyey inuu hayo xog dhaawici karta sumcadda Trump - BBC News Somali
Putin oo beeniyey inuu hayo xog dhaawici karta sumcadda Trump
17 Luulyo 2018
Waraysi uu siiyey Telefishanka Fox News ee Maraykanka shir madaxeedkii Isniintii ka dib, ayaa waxa Putin ku dooday in dalkiisu aanu lahayn karti uu kula falgali karayey ololihii madaxtinimada ee Trump ku jiray.
Waxa kale oo uu beeniyey in uu hayo xog "wax u dhimi karta sumcadda" madaxweynaha Maraykanka ama qoyskiisa.
Putin waxa uu sheegay in aanay haboonayn in xidhiidhka Ruushka iyo Maraykanku u xayirmo khilaafka siyaasadeed ee gudaha Maraykanka.
Shan dhismo oo masaajid iyo kaniisado loo kala badalay
Waxaa dunida ku yaalla dhimeyaal masaajid ahaan jiray oo hadda macbadyo kale ah iyo kuwo kaniisado ahaa oo hadda masaajid laga dhigay.
Da'dee ugu haboon ee af qalaad lagu baran karaa?
Halkani waa dugsi xanaano ah oo la yidhaa Spanish Nursery waana subax dayr ah oo mashquul badan, waxaanu dugsigu ku yaal woqooyiga London. Waalidiintu waxay caruurtooda yaryar baryaan sida loo kaxeeyo baaskiillada oo waxay u xidhayaan koofiyadaha iyo koodhadhka. Macalimiinta ayaa caruurta ku salaamaya laabta oo ay ku qabtaan iyo erayo af-Spanish debacsan ah "Buenos días!".
Arrinta uu Vladimir Putin sameeyay ee Suxufiyiinta Ruushka ay ka argagexeen
Saaxibbada suxufiga la xiray Ivan Safronov waxay sheegeen iney la yaab ku noqotay saaxibkood in looga shakiyo basaasnimo.
Taariikhada masjidka Aayaa Soofiya ee dhismihiisu uu mar ahaa kaniisadda ugu weyn dunida
Warbaahinta dalalka Islaamka ayaa maalmahan hadal haysa go'aanka madaxweynaha Turkiga, Racep Tayyip Erdogan, ku gaadhay in matxafka Aayaa Soofiya laga dhigo masaajid.
12 Luulyo 2020
Todobaatan jir Soomaali ah oo ka hadlay imtixaankii dugisa dhexe ee uu u fadhiistay
Waxa todobaadkan ka socday deegaannada maamul goboleedka Galmudug imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe. Imtixaanaadkan ayaa dib u dhac uu sababay fayraska korona awgii u hakaday, haatan se ay ardaydu si waafaqsan talooyinka caafimaad ee kala fogaanshaha dadka ugu galayaan goobo loogu talo galay iyadoo sidoo kalena lagu dedaalayo in laga fogaado wax kasta oo sababi kar in ardayda iyo macallimiintuba halis u noqdaan cudurka.
Sababaha aan ku jeclaaday diinta Islaamka, itusayna in Qur'aanku yahay kalaamka Alle SWT
Dulqaad, wanaag iyo waxyaaba badan ayay sheegtay inay ka baratay diinta Islaamka.
11 Luulyo 2020
Doorashada Soomaaliya: Ma ogtahay in gobolka Baay uu heysto kuraasta ugu badan ee baarlamaanka Soomaaliya?
Xeerka deegaameynta kuraasta ee uu dhawaan ansixyay golaha Shacabka ayaa markii ugu horreysay kuraasta baarlamaanka federaalka ah u qeybiyay 18-kii gobol ee ay Soomaaliya ka koobeyd kahor inta aan la ridin dowladdii kacaanka.
8 Luulyo 2020
Maxay yihiin ciidamada Haramacadka ee la hadal hayo?
Dad badan ayaa baraha bulshada aad u wareejinayay sawiradda xayawaanka Haramacadka iyo ciidanka dowladda ee loogu magac-daray.
9 Luulyo 2020
Xog cusub oo laga helay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee nolosha George Floyd
Waa xog laga soo xigta qalabka muuqaalka iyo codka duuba ee ku rakiban askarka booliska dharkooda.
Wasiir Soomaali ah oo sheegay in shaqadiisa uu ku waayay cod sir ah oo laga duubay
Codka sirta ayuu sheegay in uu ka duubay in ay saaxiibo yihiin oo uu ku xanqarsaday
10 Luulyo 2020
Askari 70 jir u dilay sigaar oo dil lagu xukamay
Waxaa maalma kahor magaalada Muqdisho ka dhacay dil la sheegay in uu geystay askari katirsan ciidanka dowladda oo dad badan ay ka argagaxeen.
Haweeney cisbitaal ku dhex guursatay ninkii ay jeclayd oo dhaawac ah
Diyaarad soo cagadhigatay marki loo reebay fariin ah inuu bam ku xiran yahay
"Canug ayaan dhalay aniga oo aanan uur isku ogeyn, caadadana aysan iga joogsan"